DG Hogaamiyaha Galmudug Maxamed Axmed Kaariye oo si dhow u shaqeeya ayaa hogaamiyaasha midowga u sharaxan in ay xal gaaraan iyadoo laga baqayo in laga baaraandego doorashooyinka guddiga maamulka ee labada dhinac la filayo.
Qoor-Qoor wuxuu sheegay in la joogo waqtigii laga wada hadli lahaa doorasho degan si dhinacyada dagaallamaya ay u joojiyaan farriimaha xun xun.
Dhaliilaha iyo dhaliilaha ayaa inta badan sax ah, hadii ay jirtona qofka masuulka ah ama xisbiga la dhaliilayo ayaa sixi doona, hadii aysan aheyn waxaan isku dayeynaa inaan ka hor tagno inay dhacaan. Sidaas waxaa yiri madaxweynaha Qoor-Qoor.
“Xilligan la joogo doorashada oo ay yar yihiin kala duwanaanshaha heshiiska doorashada, fariimaha qaar waan hubaa in la sameeyay hadana waxay rabaan in dib loo dhigo fariimaha la dirayana waxay noqon doonaan kuwa xulasho, dulqaad & isu tanaasul badan. Marka aan ka hadalno, asxaabta mararka qaarkood wax naqdiya waxaa loola jeeday in ay wax qabtaan oo aan waligood loola jeedin in ay dib u dhacaan. ayuu raaciyay Hogaamiyaha DG Galmudug.
Dib udhaca ku yimid hirgelinta Jadwalka Doorashooyinka ee loo qorsheeyay 1-da Oktoobar, 2020, Dowladda Federaalka waxay u gudbisay guddi-hoosaadyo matalaya Dowlad-goboleedyada Hir-Shabeelle, Galmudug, Koonfur-galbeed, waxayna soo magacaabeen xubno u matalaya doorashooyinka Gobaladda Waqooyi iyo Federaalka.
Haddaba, suurtagal ma tahay in xisbiyada siyaasaddu ay joojiyaan dhaliisha ay isu jeedinayaan inta ay ka shaqeynayaan xallinta khilaafka doorashada qabanaya?